Umkhiqizi Wokupakisha Oguquguqukayo & Nezikhwama Zokupakisha Zokudla Umkhiqizi/Umhlinzeki | I-DQ PACK
I-DQ PACK - Umkhiqizi wokupakisha oguquguqukayo futhi ogxile embonini yokunyathelisa iminyaka engaphezu kwengu-31. Ucingo: +86-18125839585 I-imeyili:dqpack@danqing.net
Asukume Isikhwama Soziphu
Sukuma Isikhwama Esinezimbobo Ukuze Uthole Ijusi
Kraft Stand Up Isikhwama
Isikhwama se-Quad Seal
Isikhwama se-Three Side Seal
Amafilimu Okupakisha Aphrintiwe
Ifilimu Ye-Barrier Ephezulu Efomini Lomqulu
Ifilimu ye-Pvc Shrink Sleeve
I-Printed Packaging Film Roll
Ifilimu Yebanga Lokudla
Pp,pvc,pet,pekelaable Cupsealing Film
I-Die Cut Handle Bag
Isikhwama Sokupakisha Ngemboni
Ikhofi/tiye Izikhwama zokupakisha
Isikhwama Sokupakisha Sokudla Kwezilwane Ezifuywayo
Isikhwama sokupakisha se-Sanitary Pad
Isikhwama Sokupakisha I-Detergent Powder
Izikhwama Zokufaka Ukudla
Izikhwama zokupakisha zezimonyo
Izikhwama Ezintsha Zezithelo
Izikhwama Zokupakisha For Candy Biscuit Ice Cream
Ikhofi & Netiye Packaging
I-Pet Food Packaging
Ukupakisha Imikhiqizo Yezimonyo Nokunakekela Umuntu
I-DQ PACK-FLEXIBLE PACKAGING MANUFACTURER KUSUKELA ngo-1991
Isevisi yokwenza ngokwezifiso izikhwama zokumisa nezikhwama zokupakisha ukudla
AMA POUCH ENESPOUT
Isikhwama se-spout sinezinzuzo zokuqina komoya, ubufakazi bomswakama futhi akukho ukuvuza. Ingakwazi ukugwema ukukhanya futhi yandise usuku lokuphelelwa yisikhathi kwemikhiqizo.
AMA POUCH NGEZIPPER
I-DQ PACK ifakwe izintambo ezi-6 zokupakisha ezizenzakalelayo kanye nezokuphrinta, izintambo ezi-4 ezithuthukisiwe ze-solvent-free lamination ezithuthukisiwe. Yonke inqubo yethu yokukhiqiza yenziwa ngokuhambisana nezidingo ze-ISO9001-2018 BRC.
Njengomholiumenzi wokupakisha oguquguqukayo, umkhiqizi wezikhwama zokupakisha zokudla, futhi sukuma umphakeli wesikhwama, i-DQ Pack igxile embonini yokunyathelisa kusukela ngo-1991.
Yonke inqubo yethu yokukhiqiza yenziwa ngokuhambisana nezidingo ze-ISO9001-2018.Futhi uphawu lwethu lokuthengisa "i-DQ PACK CN" sekuyigama lomkhiqizo elaziwayo eligcina isikhundla esiphambili phakathi kwezimakethe zasekhaya zezinkundla zokupakisha eziguquguqukayo ne-laminated.
Izikhwama zokupakisha eziguquguqukayo zisetshenziselwa kakhulu ikhofi& ukupakishwa kwetiye, ukupakisha ukudla, ukupakisha isiphuzo sejusi, ukupakisha ukudla kwezilwane ezifuywayo, njll.
Isikhwama Soziphu Sokudla Kwezilwane Ezifuywayo
Isikhwama soziphu sokudla
Isikhwama se-candy esikhethekile
Ukwenza Kwethu ngokwezifiso - Uchwepheshe& Isebenza kahle
Sinikeze i-OEM&I-ODM yenza izikhwama zokupakisha ukudla kanye nesevisi yokupakisha eguquguqukayo iminyaka engama-25. Kungakhathaliseki ukuthi ziyini izidingo zakho, ulwazi lwethu olunzulu nolwazi lwethu lukuqinisekisa umphumela owanelisayo. Senza umzamo wethu omkhulu ukunikeza ikhwalithi enhle, isevisi eyanelisiwe, intengo yokuncintisana, ukulethwa okufika ngesikhathi kumakhasimende ethu abalulekile. Singenza umbala wobufakazi obuqinile nombala wemikhiqizo yokuphrinta yokugcina ifane ngaphezu kwama-98%. Uma ufuna isiko abakhiqizi bezikhwama zokupakisha ukudla, sukuma umekhi wesikhwama noma umenzi wokupakisha oguquguqukayo, wamukelekile ukuthintana ne-DQ PACK.
Ukukhiqizwa noma ukuhweba kwempahla noma amasevisi athengiswayo
Ukukhiqizwa Kwesivivinyo& Ukuqinisekiswa Kwesampula
Sihlose ukuqonda izidingo zakho ngokugcwele ukuze sinciphise ubungozi bephrojekthi
. Isevisi nokusekela
I-DQ PACK yamukela ifilosofi yayo "yokunikeza izinzuzo kubasebenzi, ukubhekelela umphakathi", okuhloswe ngayo ukulwela ukuba ngcono kakhulu.
uzakwethu ovela emakethe yendawo yamakhasimende omhlaba nabahlinzeki.
Ihlanganisa indawo yaphansi esebenzisekayo engamamitha-skwele angu-35,000 futhi ifakwe izintambo ezi-6 zokupakisha ezizenzakalelayo nezokunyathelisa, izintambo ezi-4 ezithuthukisiwe ze-high-speed-free-solvent-free.
I-DQ PACK iqinisekiswe i-BV, i-FDA, i-SGS ne-GMC, kanye nesistimu yokuphatha ikhwalithi ye-ISO9001-2018.
Sihlinzeka ngomklamo wokuhlanganisa wesevisi yokuma okukodwa, ukulinganisa, ukukhiqiza, ukulethwa, ukufakwa, kanye nesevisi yangemuva kokuthengisa.
Imithetho yokumisa yenqubo yokukhiqiza eqinile, ama-oda ayizigidi eziyi-18 avela emazweni angaphandle.
I-DQ PACK yaqala ukuzibophezela kwayo ekuhlinzekeni ngezixazululo ezivumelana nezimo zokupakisha nokuphrinta ngo-1991. Isekelwe esiFundazweni sase-Guangdong, inkampani yethu inabasebenzi abangaphezu kuka-200 abanezinsiza ezingu-30,000 square metres e-Dongshanhu Industrial Park.
Indawo yethu yokusebenzela yokukhiqiza ihlanganisa indawo yonke esebenzisekayo engamamitha-skwele angu-35,000 futhi ifika ifakwe imigqa yokupakisha ezenzakalelayo eyi-6 nemigqa yokunyathelisa, izintambo ezi-4 ezithuthukisiwe ze-high-speed-free-solvent-free. Yonke inqubo yethu yokukhiqiza yenziwa ngokuhambisana nezidingo zeI-ISO9001-2018, kanye nophawu lwethu lokuthengisa "i-DQ PACK CN" sekuyigama lomkhiqizo elaziwayo eligcina isikhundla esiphambili phakathi kwezimakethe zasekhaya zezinkundla zokupakisha eziguquguqukayo ze-laminated nezokunyathelisa. Njengenkampani yokupakisha eguquguqukayo ehamba phambili ene-self run the export right in the local printing market, i-DQ PACK imise amagatsha e-Malaysia nase-Hong Kong ngokulandelana..
Izixazululo zangokwezifiso ze-OEM, yenza ngokwezifiso ukupakisha kwakho.
Izisebenzi zenkampani ezingaphezu kuka-200, u-R&D iqembu.
Indawo yezitshalo iyi-30000+ square metres.
100+ abaklami kanye nethimba Professional lochwepheshe.
Yonke inqubo yethu yokukhiqiza yenziwa ngokuhambisana nezidingo ze-ISO9001-2018, futhi uphawu lwethu lokuthengisa "DQ PACK CN" sekuyigama lomkhiqizo owaziwayo eligcina isikhundla esihamba phambili phakathi kwezimakethe zasekhaya ze-laminated flexible packaging and printing fields.
Isithombe seqembu lekhasimende
Iphathi yosuku lokuzalwa lwabasebenzi
Uma unemibuzo mayelana nemikhiqizo noma amasevisi ethu, zizwe ukhululekile ukuxhumana nethimba lesevisi yamakhasimende. Nikeza okuhlangenwe nakho okuhlukile kwawo wonke umuntu ohilelekile nomkhiqizo. Sikuphathele amanani akhethekile nemikhiqizo yekhwalithi engcono kakhulu.
Ngemuva kokuhlolwa kwenkambu okwenziwa izinhlangano zomhlaba ezihamba phambili zokunikeza izitifiketi esizeni, i-DQ PACK iqinisekiswe yi-BV, FDA, SGS kanye ne-GMC, kanye nesistimu yokuphatha ikhwalithi ye-ISO9001-2018.
Othintwayo: UNksz Anna
Ikheli: Dongshanhu Industrial Park, Chaoan District, Chaozhou City, Guangdong, China